आनन्द ढुंगानालाई ऋषि धमलाको प्रश्न : युवा पुस्तालाई सक्षम नबनाउने ? नेतृत्व हस्तान्तरण कहिले हुन्छ ? (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, १९ साउन । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता आनन्द प्रसाद ढुंगानाले आफूहरुले क्रियाशिल सदस्यता विवादको काम ९९ प्रतिशत सम्पन्न गरेको र अब एक प्रतिशतमात्रै काम बाँकी रहेको स्पष्ट पारेका छन् । हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने,‘अब यत्रो ठूलो क्रियाशिल सदस्य छन्, ८ लाख ५२ हजार ७ सय ११ क्रियाशिल सदस्यको बारेमा निर्णय गर्दैगर्दा स्वभाविक रुपमा १ प्रतिशतमात्रै काम बाँकी हुनु भनेको यो त ठूलो कुरा हो नि ।’ अहिले विवाद रहेका ठाउँको समाधान गर्न शीर्ष नेताहरुलाई जिम्मा दिईएको पनि उनले सुनाए । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भदौ १६, १७, १८ र १९ को मितिलाई नटार्नेगरि अधिवेशनको तल्लो कार्यतालिका व्यवस्थापन गर्न भनेको पनि सुनाए ।
पत्रकार धमलाले नेपाली कांग्रेसले युवा पुस्तालाई नेतृत्व कहिले हस्तान्तरण गर्छ भनेर प्रश्न सोधेका छन् । त्यसको जवाफमा उनले भने,‘कांग्रेसमा सबै सक्षम छन् । अहिलेको परिस्थिति छ, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा परिपक्वताको बाटो लिनुपर्छ । आजको दिनमा कांग्रेसको परिपक्व नेताको आवश्यक छ ।’
काठमाडौं, भदौ ३१ । नेपाली कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरेले शेरबहादुर देउवालाई सभापतिको उम्मेदवार हुनबाट कसैले